Umehluko wesitayela se-cowboy yezingubo wukuthi kulula, kusetshenziswe futhi kuhluke ukuvezwa kwamamodeli. Kuye sonke isikhathi isitayela asishintshile, ngaphandle kwemininingwane encane. Le samanje ivela e-United States of America, futhi ikakhulukazi endaweni ebizwa ngokuthi i-wild west. AmaMelika abiza lesi sitayela "entshonalanga".
Izici zesitayela zesimo
Izembatho zesitayela sezwe zibhekene nama-pasteltons aphansi. Imibala eyinhloko yi-beige, i-gray futhi i-brown. Izinkinobho ngokuvamile zenziwe ngokhuni noma ensimbi.
Izwe linezithundu ezinokuthula nezikhululekile: ama-sarafans, ama-blouses, izingubo, izembatho phansi, ama-cardigans amaningi kanye nama-sweaters. Zonke zazo zikhonjiswe kusuka ezintweni zemvelo - uboya, i-tweed, ikotini, i-flax. Isitayela se-Cowboy siphelele ngama-knitted knit, i-lacework ne-lace. Okuthandwa kakhulu yizo zonke izinhlobo zamaphetheni, umhlobiso we-rustic noma wezinhlanga, ezihambisana nezingubo. Ukuze uqedele kungenzeka ukuthi uthwale u-lacing, ubuhlalu, u-applique, umcengezi noma i-embroidery mayelana nokuthi kukhulunywa ngani ngaphambili.
Mayelana nabalimi kanye nama-cowboys, abaseMelika bakhunjuzwa ngezimbuko zesikhumba, ezinamaphiko ohlangothini ngalunye, nezinhlamvu eziboshwe entanyeni nasejunks ebanzi. Namuhla, amakhredishi asetshenziswa njengezesekeli, futhi ngaphambi kwalokho aqala ukwenza umsebenzi wokuvikela ngesangweji eshaywa yintamo. Isici sesitayela se-Awukwazi ukufaka esikhundleni - isishiyi ngethambo namagqabha amakhulu. Umlenze wawuphethe isigqoko sakhe ngesikhathi egibele futhi akazange amvumele ukuba ahambe ekhanda lomgibeli. Esinye isici esiyingxenye yesigqoko sokugqoka i-cowboy yisitayela se-cowboy. Amantombazane ayethanda ukugqoka ama-blades ambala anemibala emikhulu, ekhumbuza ama-flashlights. Futhi imilenze yakhe emihle yayigcwele ama-sweaters ama-sweaters ende. Izigqoko zazivame ukwenziwa nge-chintz, ukuthunga phambi kwepronti, eyayinezikhwama ezinkulu ezingeni lezandla.
Yakha isithombe ngamandla ethu
Kuze kube manje, cishe akekho ogqokayo izingubo zezinkomo, engabizi abantu abafuna ukugibela amahhashi. Phela, izingubo ezinjalo zikhululekile kakhulu. Akushukumiseli, futhi indaba eyenziwe kuyo, iphefumula kahle, ukuze kube lula ukuchitha ukuphumula kwakho futhi ungakhathazeki ngemiphumela. Izinto zale ndaba zifanelekile ukusebenza emsebenzini we-dacha noma ziphumule kwi-barbecue.
Abantu abasha banamuhla bavame ukuhlela iqembu eligqoke, futhi lokhu akudingeki ukuba libheke isenzakalo esifanele. Kwanele ukulinda i-Halloween futhi ufake izingubo zakho ozithandayo. Uma unquma ukuya emcimbini onjalo futhi ube khona njenge-cowboy, amathiphu anikezwe ngezansi azokusiza.
Okokuqala, phonsa ama-stereotypes ekhanda lakho. Ukugqoka izingubo zezwe akusho neze ukubukeka njengezinkomo zangempela. Ukubukeka kwesitayela sendabuko kwakuyisidingo sentshonalanga yasendle. Lezi zimo zaziqondiswa impilo ngokwayo. Noma kunjalo, ukuze udale isithombe esidumile namuhla, kwanele ukuxuba izingubo zesimanje nezingubo zeminyaka edlule. Ezweni kunezikhombandlela eziningi ezihlukene zasentshonalanga, isibonelo, i- "Tex-Mex", "i-cowboy", "i-Rodeo" nabanye abaningi. Udinga nje ukuthi unqume ukuthi yikuphi okukhethwa kukho okumele ukhethe futhi uhambe ngeholidi.
Ufuna ugqozi? Khumbula isiko sama-pop: UJohnny Cash noTim McGrohe babengummeli oqhakazile kule ndlela yokugqoka. Thola ama-movie namasimu ase-western. Bheka ukuthi yiziphi iziqhawe ezihambahamba, qaphela izinto ezithile, kodwa ungakhohlwa ngesitayela sakho ngasinye. Uma umisa amehlo akho ku-jeans, zama ukukhetha onobuhle obukhulu obenziwe bushelelezi futhi ngesikhathi esifanayo. Umbala kungcono ukukhetha okwesibhakabhaka noma enye, njengoba usondelene nayo ngangokunokwenzeka. Ama-shorts ama-denim, ezenziwe ngezandla zakho, aphelelise ngokuphelele isithombe.
Ama-patches nezikhala ezihlukahlukene ziyizici zesitayela sezwe. Ngakho-ke, kunconywa ukuba ugqoke izingubo ezinezinto ezinjalo. Ungenza ama-patches ngokwakho - izicucu zendwangu ezivela kwezinye izingubo uphinde ubheke ezindaweni ezahlukene.
Isigqoko esinamahlombe amakhulu, isikhumba sesikhumba esinesibheji esikhulu, ihembe ebhokisini - kuyisimo esibalulekile somgodla wangempela. Ihembe lingenziwa nge-denim.
Amantombazane kufanele agqoke izingubo ezenziwe nge-chintz, ama-blouses nge-sleeve-lantern of tone ekhanyayo nama skirts amahle. Ungadluli i-apron nge-pockets ebanzi ngaphambili, yiziphi abesifazane zasentshonalanga zasendle abathande ukugqoka.
Izicathulo ze-Cowboy, njengezinye izingubo, zazizinhle futhi zisebenziseka ngangokunokwenzeka, ngakho-ke kungcono ukuyeka ukubuka amabhuzu ngezinyosi ezikhomba. Kunconywa abesifazane besifazane ukuba banake izicathulo, izimbadada noma izicathulo eziphakeme kakhulu ngezibambo noma ukuphoqa.
Umbala we-Orange ezembatho
Izitayela zezinwele nsuku zonke
Imfashini, indlela yokukhetha isitayela sakho ezembatho
Khetha u-hairdo ophelele wezinwele ezinde
Isitayela sobuhlanga emlandweni wemfashini
I-Juniper: ukufika, ukunakekelwa
UNkosana uHarry usuqedile umsebenzi wakhe wezempi futhi wathunyelwa ekuhlengiseni izindlovu
Indlela yokutshela umyeni wakho ngokukhulelwa
Ukwelashwa kwezifo namazambane
Isitshalo seqanda esilula ekheniwe
Indlela yokudalula ubulili?
Ukuphumula okuphephile ngamanzi
Ukwelashwa kwe-seborrheic dermatitis ngezikhambi zabantu